Masoivohon’i Sina : Nanamafy fiaraha-miasa -
AccueilRaharaham-pirenenaMasoivohon’i Sina : Nanamafy fiaraha-miasa
09/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mitsahatra manamafy ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena vahiny ny zandarimariam-pirenena. Taorian’ny nandraisan’ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ireo vahiny Frantsay, dia nandray ny masoivohon’i Sina miasa sy monina eto Madagasikara, Rtoa Yang Xiaorong, indray ny tenany, tao amin’ny birao fiasany tao Betongolo omaly faha-08 aogositra 2018.
Nandritra ity fihaonana ity no nifaneken’ny roa tonta hanamafy sy hanatsara hatrany ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin’izay. Nilaza ity masoivoho ity fa hitohy hatrany io fiaraha-miasa amin’ny lafiny io maro mba hanatsarana ny asan’ny Zandarimaria. Nisy ihany koa ny fangatahany manokana amin’ny fiarovana ireo teratany Sinoa mampiasa vola sy monina eto Madagasikara. Efa betsaka hoy izy ireo zava-bitan’ny firenena Sinoa ho an’ny zandarimaria malagasy, ka mbola hitohy hatrany izany amin’ny lafin’ny fampiofanana ireo zandary ho any Sina sy ny eto an-toerana, etsy andaniny ihany koa ireo fampitaovana maro samihafa.
Nilaza kosa ny jeneraly Randriamanarina Jean Christophe, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena nandritra ity fihaonany voalohany tamin’ny masoivoho Sinoa ity hatramin’ny nanendrena azy fa vonona hatrany amin’ny fiaraha-miasa indrindra eo amin’ny lafin’ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Hisy hatrany hoy izy ny fandefasana ireo zandary hiofana any Sina sy ny hametrahana ireo paikady hiarovana ireo teratany vahiny miasa sy monina eto Madagasikara mba ho fampandrosoana ny Firenena.
Fitsidihana tany Londres : Vokatra azo tsapain-tanana